Wednesday July 19, 2017 - 10:25:57 in Wararka by Super Admin
iska hor'imaadyo xooggan oo u dhaxeeya ciidamada Yahuudda Sahyuuniyadda iyo dhalinyaro muslimiin filasdiiniyiin ah aya dib ugasoo cusboonaaday gudaha iyo hareeraha masjidka barakaysan ee al-aqsaa kadib markii kooxo xagjirayaal yahuud ah oo taage
iska hor'imaadyo xooggan oo u dhaxeeya ciidamada Yahuudda Sahyuuniyadda iyo dhalinyaro muslimiin filasdiiniyiin ah aya dib ugasoo cusboonaaday gudaha iyo hareeraha masjidka barakaysan ee al-aqsaa kadib markii kooxo xagjirayaal yahuud ah oo taageera ka helaya ciidamada booliska ay isku dayeen in ay xoog ku galaan masjidka.
wararka ka imaanaya filasdiin ayaa sheegaya in maalintii 7-aad uu xiranyahay masjidka barakaysan ee alqsaa waxaana socda dagaal u dhaxeeya Yahuudda iyo muraabidiinta iyo muraabidaadka muslimiinta ah kuwaas oo yahuudda udiidaya in ay nijaaseeyaan mid kamida sedaxda masjid ee barakaysan oo muslimiinta leeyihiin meel walba oo ay joogaan.
Xalay saqdii dhexe ayaa la sheegay in kooxo Yahuud ah oo kaalmeysanaya ciidamo hubeysan ay iqtixaameen oo ay gudaha masjidka galeen kadibna waxay weeraro loo adeegsado quraarado shidaalka lagasoo buuxiyay kala kulmeen dhalinyarada muslimiinta.
Takbiirta ayaa isqabsatay meelo badan oo kamid ah albaabada masjidka laga galo waxaana lamaqlayay dhawaqa rasaasta cijirka ka sameysan iyo rasaasta nool nool oo ciidamada Yahuudu adeegsanayaan.
dhawaqa takbiirta oo ay ku dhawaaqayaan dhalinyarada muslimiinta ah ee ribaadka uga jira masjidka ayaa mid rasaasta uga xanuun badan ku noqotay Yahuudda sahyuuniyadda waxaana laga sheegay in kumanaan kun oo muslimiin hor leh ay usoo baxeen difaaca masjidka iyagoo ku hubeysan takbiirta.
Ilinka baabul asbaad ee ku beegan magalada qadiimka alqudus ayaa noqotay meesha ugu daran oo ay ka dhacayaan muwaajahaatka u dhaxeeya muslimiinta iyo cadawga Yahuudda.
Sheikh Cumar alkiswaani oo ah mudiirka masjidka ayaa ugu baaqay muslimiinta ku dhaqan filasdiin ay usoo nafiiraan dhanka masjidka ayna difaacdaan muqadasaadkooda isagoo si kulul u dhaleeceeyay isku dayga Yahuuddu ku doonayso in ay ku burburiso masjidka.